फेरि पनि प्रदेशकाे नाम र राजधानीकै कुरा | mulkhabar.com
October 28, 2018 | 7:30 am 171 Hits
– रामनारायण बिडारी –
प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नाम प्रदेशसभाबाट तोक्ने गरी सहमति भएर संविधानमा नै प्रदेशसभाको दुई तिहाइ सदस्यको निर्णयले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सक्ने प्रावधान राखियो । यो प्रावधान अनुरूप केही प्रदेशले नाम र राजधानी पनि एकै निर्णयमा गरिसकेका छन् । केही प्रदेशले भने दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन कोसिस गरिरहेका छन् । प्रदेश राजधानी खास सर्वसाधारण जनताको दैनिकी वा आवश्यक कामको लागि सामान्यतः गइरहनु पर्ने ठाउँ होइन । तर त्यो ठाउँको विकासको लागि भने केही भूमिका खेल्ने भएकोले त्यस ठाउँका जनता राजधानी यहीं आओस् वा रहोस् भन्ने चाहना राख्दछन् । सङ्घीयतामा देश प्रवेश गरेको हँुदा सङ्घको राजधानी काठमाडांैंमा रहने कुरा संविधानतः घोषित छ । तसर्थ तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी काठमाडांैं उपत्यका बाहिर रहनु पर्ने कुरामा खास विवाद देखिंदैन ।
उपत्यका कतिलाई भन्ने ? थानकोट, धुलिखेललाई उपत्यका भन्न पनि खास फरक देखिंदैन । हाल नेपाल सरकारले प्रदेश नं. तीनको राजधानीको कामकाज गर्न मकवानपुरको हेटौंडालाई तोकेर त्यस ठाउँमा सबै प्रदेश स्तरका कार्यालय समेत तयार गरेर कामकाज गरिरहेको अवस्था छ । कार्यालय भवन, आवास, सभाहल, आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधारको काम पनि भइसकेको छ । नेपालको झण्डै मध्य तराईमा पर्ने भित्री मधेस हेटौंडा भारतीय सिमानाबाट पनि टाढा छैन । काठमाडांैं उपत्यकाबाट पनि करिब हाल ८० किलोमिटर दूरीमा छ । यो दूरीलाई घटाउन सकिन्छ । एउटा आधा कि.मि.को सुरुङ भीमफेदीबाट कुलेखानीमा बनाइदियो भने यो करिब साठी कि.मी. जतिमा झर्छ । यो मार्गलाई अलि स्तरोन्नति गरिदियो भने करिब ९० मिनेटमा काठमाडांैबाट हेटौंडा पुग्न सकिन्छ । यसको मतलव रक्सौल र काठमाडांैंबीच पुलको काम हेटौंडाले गर्दछ । प्रदेश नं दुईसँग जोडिएको छ यो । दुई नं.को राजधानी महोत्तरीभन्दा पश्चिम सम्भवतः हुँदैन । तसर्थ दुई र तीन नम्बर प्रदेशको राजधानीको अवस्थितिले देश विकास र रणनीतिक योजनालाई पनि सहयोग पुग्न सक्छ ।
महेन्द्र राजमार्गको मध्य भाग, मध्य पहाडी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, कान्ती राजपथको संगमस्थल, पहाड र तराईको बीचमा पर्ने भूभाग जसले समन्वयको काम गर्न सघाउ पुग्दछ । धादिङबाट मकवानपुर आउन पनि भरतपुर, चितवनतिर पुग्न पर्दैन । पहाडी मार्ग मनहरी खोलाबाट सोझै आदमघाटतिर सडक बन्दै छ । यही आर्थिक वर्षबाट नै माथि भनिएको सुरुङ सर्भे प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । यी सबै मार्ग चालु छन् । आगामी वर्षबाट सबै कार्य सम्पन्न हुँदैछ । यसकारण प्रदेशसभासद्ले हेटौंडालाई नै राजधानी तोक्दा सबै तरिकाबाट उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।
प्रदेश नं तीनमा काठमाडांै पनि पर्ने भएकोले अधिकांश नेता तथा सांसदहरूको व्यवहार काठमाडांैमा नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष देखिन्छ । तसर्थ यो मानसिकताले काठमाडांै वरपर नै राजधानी हुनुपर्ने धारणा अव्यक्त रूपमा देखिन्छ । यसको लागि सङ्घीय सरकारले यही वर्षमा थानकोट – चित्लाङ सडकमा सुरुङ्ग बनाउने घोषणा गरेको छ । यसको लागि सर्भे पनि यसै वर्ष थालिन छ । यो सुरुङ बनेपछि थानकोटबाट चित्लाङको दूरीको समय बढीमा १५ मिनेट लाग्छ ।
चित्लाङ, मार्खु, टिष्टुङ, पालुङसम्मको उपत्यकामा प्रशस्त जमिन पनि छ । उर्वरा भूमि पनि छ । हावापानी काठमाडाैंको भन्दा राम्रो छ । स्वच्छ वातावरण छ । विश्व प्रसिद्ध दामन, नेपाल प्रसिद्ध मानव निर्मित इन्द्रसरोवर, इतिहासको लिच्छवीकालीन मानदेवको दरवार एवं प्राचीन मूर्तिहरू र संस्कृतिले भरिपूर्ण ठाउँ छ । काठमाडांैं उपत्यकाको जनघनत्वलाई नियन्त्रण गर्न विकल्पको रूपमा पालुङ, चित्लाङ्को विकास गर्न सकिन्छ । यही ठाउँ नै प्रदेशको राजधानी उपयुक्त हुन सक्छ । यो सबैतिरको माझ पर्छ । चितवनबाट पनि हाल मनहरीबाट बनिरहेको मार्ग पालुङमा आइपुग्छ करिब दुई घण्टामा । धादिङबाट करिब दुई घण्टामा पालुङ आइपुगिन्छ जुन मार्ग निर्माण भइसकेको छ ।
काठमाडांैं उपत्यकाबाट करिब एक घण्टामा पालुङ । आधा घण्टामा चित्लाङ पुगिन्छ । वातावरणीय दृष्टिले पनि यो अति रमणीय छ । कृषि उपज दृष्टिले यो उपत्यका अब्बल छ । जल विद्युत् उत्पादन गर्ने मुख्य ठाउँ हो साथै जलाधार भूभाग हो । तसर्थ यो ठाउँमा प्रदेश राजधानी सबै प्रकारबाट राम्रै हुन्छ ।
काठमाडांैं उपत्यकाको उचित विकल्प यही भूभाग हो । यहाँ राजधानी हुँदा हेटौंडा दुई घण्टामा पुगिन्छ । सुरुङ्ग बनेपछि ९० मिनेटमा पुगिन्छ । काठमाडांैं एक घण्टामा नै पुगिन्छ । यसले हेटौंडा र काठमाडांैबीच पुलको रूपमा काम गर्दै उपत्यकाको चाप घटाउँछ । तसर्थ यो ठाउँ राजधानी राख्न पर्ने ठाउँमध्ये उम्दा ठाउँ हो ।
हेटौंडामा औद्योगिक क्षेत्र छ । यसलाई विस्तार गर्ने पनि योजना छ । हेटौंडाबाट काठमाडांैं आउन सुरुङ बनाएर मार्ग विस्तार गरेमा पूर्वतिरका र पश्चिमतिरका सवारी साधन यही बाटो गरी आउँछन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको निजगढको फास्ट ट्रयाक (द्रुतमार्ग) मा पनि हेटौंडा जोड्ने सम्बन्ध मार्ग बन्दैछ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि हेटौंडाको भविष्यसँग सकारात्मक कुरा हो । यस्तो उज्ज्वल भविष्य बोकेको हेटौंडा शहर ग्रीन सिटी (हरित शहर) र शहीद स्मारकले परिचित छ ।
नेपालको ठूलो औद्योगिक नगरको विकासमा महेन्द्र राजमार्गको दायाँबायाँका घरहरूले बाधा पारिरहेको छ । दिनहुँ दुर्घटना व्यहोरिरहेको छ । यदि यो राजमार्ग नारायणघाट, लाहान, वुटवलको जस्तो गर्न सकिँदैन भने यहाँ विकास हुनै सक्दैन । सडक चौडा बनाउनु जन अधिकारको कुरा हो । शहर विकास स्थानीय तहको कर्तव्य हो । व्यक्तिका अधिकारका कुराभन्दा सार्वजनिक हितको लागि, देश विकासको लागि राज्यले सोच्नुपर्छ । यही कुरा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले समन्वय गरेर यथाशीघ्र गरोस् । मुआब्जा बुझेका, घर बनाउन सम्झौता गरेर घर बनाएका तथा अन्य ठाउँमा बासस्थान भएका र माथिको कुनै पनि कुरा नभएकाहरू बीच फरक नीति बनाएर राजमार्ग मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्छ । जसको सामान्य नमुना चितवनको टाँडी बजारमा देखिन्छ । अझ यसमा मान्छे पैदल हिँड्ने, पशु हिँड्ने मार्ग पनि चाहिन्छ । अनि मान्छे अकालमा मर्न पर्दैन ।
जनताको जीउधनको सुरक्षा हुन्छ । सडकको मापदण्ड मिचेर घर बनाउन मिल्दैन । सडक मापदण्ड मिचेर घर बनाउने र बनाउन दिने दुवैबाट लापरबाही भइरहेको छ । तसर्थ हेटौंडा विकास निम्ति राजमार्ग बढाइनुको विकल्प छैन नत्र राजधानी मात्र हैन औद्योगिक शहर पनि गुम्ने डर छ ।- गाेरखापत्रबाट